पराइ भूमिमा पसिना- विविधा - कान्तिपुर समाचार
पराइ भूमिमा पसिना
युवाका आँखामा विदेशी भूमिको सपना अचम्मसँग नाचेका छन् ।
भाद्र ४, २०७५ झमक घिमिरे
काठमाडौँ — गए साता युवाले औपचारिक, अनौपचारिक कार्यक्रम गरेर अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाए । यस पंक्तिकार युवाका मनोभावना, इच्छा, आकांक्षा, दु:ख, सुख, पीडा, व्यथासँग नजिकैबाट परिचित छे । समृद्ध नेपालको नारा निकै जोडतोडले घन्किरहेको छ ।
नेपालमा काम नपाएर अर्थात रोजगारी नेपाली भूमिमा नपाएर दिनदिनै युवा जनशक्ति बाहिरिरहेका छन् । यसलाई विस्तारै रोक्न सकिएन भने हाम्रा नेताहरूले देखेको समृद्धिको सपना तुहिने मात्र होइन, देश जर्जर हुनेछ । हाम्रा युवा पनि यस विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
अर्काको भूमिमा गएर जे पनि गर्न तयार हुने हाम्रा जवान पाखुरी किन आफ्नै भूमिमा केही गर्न तयार हुँदैनन् ? सरकार समृद्धिको नारा दिएर चुपचाप बसेर हँुदैन । युवा जनशक्तिलाई रोकेर यही पसिना बगाउने वातावरण बनाउन सकिँंदैन भने समृद्धिको सपना देखेर के काम ? कृषि, उद्योगधन्दा, पर्यटन आदि हरेक क्षेत्रमा युवा जनशक्ति चाहिएको छ । आज कृषि क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । कृषियोग्य जमिन भूमाफियाको कब्जामा छ । जमिन अन्धाधुन्द प्लटिङ गरिएको छ । बसाइँ–सराइ भोगिनसक्नु छ । उब्जाउयोग्य जमिनमा धमाधम मानबस्ती बढ्दैछ ।
सरकारले विशेष नीति ल्याएर यसलाई रोक्न सकेन भने यो समस्या विकराल बन्नेछ । यो विषय कहाँनेर युवासँग जोडिएको छ भने उनीहरूले श्रम गर्ने कहाँ ? उनीहरूले पसिना बगाउने ठाउँ कहाँ ? त्यो ठाउँ सुरक्षित गर्न पनि भूमाफियालाई जथाभावी जमिन प्लटिङ गर्नबाट रोक्नु आवश्यक छ ।
पंक्तिकारसँग निकै युवाले प्रश्न गर्ने गरेका छन्– यहाँ बसेर के गर्ने ? विदेश गयो भने दुई–चार पैसा त हुन्छ । आफ्नो जन्मभूमि बसेर के गर्ने भन्ने मानसिकता उनीहरूमा छ । आफ्ना घरपरिवारसँग दु:खसुख बाँडेर विदेशमा बगाउने पसिना यहीं बगाउने नि भन्दा उनीहरू मौन बस्छन् । एकछिन गमेर जवाफ दिन्छन्, ‘सही कुरा गर्नुभयो ।’ विदेशी भूमिमा पैसाको बोट छ, गएर ट्याप्प–ट्याप्प टिपेर ल्याउनलाई ? रगत–पसिना बगाएर पनि ज्यानको सुरक्षा छैन भने किन आफ्नो देशमा रगत–पसिना बगाउन कञ्जुस्याइँ ? आफ्नै भूमिमा गरेर आफ्नै परिवारसँग ढिँडो–रोटी खान किन लाज ?
हाम्रा युवा आफ्नो भूमिमा काम किन गर्न चाहँदैनन् ? उनीहरूका आँखामा विदेशी भूमिको सपना अचम्मसँग नाचेका छन् । कतिका सपना मूर्त हुन्छन् भने कतिका बीचैमा तुहिएर झर्छन् । नेपाली समाजको साँच्चै समृद्धि चाहन्छौं भने नेपाली युवाले एकपटक आफ्नो भूमिको माटो छोएर सोच्नैपर्छ । आफ्नो मातृभूमिको लागि पसिना बगाउन तयार नभएसम्म समृद्धि र विकासको सपना नदेखे हुन्छ । सरकारले विशेष युवामुखी कार्यक्रम ल्याएर युवालाई यहीं स्वरोजगार बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक परिवर्तनका आन्दोलनमा उल्लेखनीय सहभागिता जनाएका युवाले अब राष्ट्र निर्माणमा पनि सहभागी हुनु आवश्यक छ । सरकारले पनि युवाको क्षमता, दक्षता अभिवृद्धि गर्दै रोजगार बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०७:५०
जीवन काम लाग्ने बनाऔं
असार ९, २०७५ झमक घिमिरे
काठमाडौँ — यहाँ आफ्नैलागि बाँच्ने र हाँस्नेहरू धेरै छन् । हुन त मान्छेको जातै आफ्नोलागि मात्र सोच्छ र आफ्नै सुखसुविधामा रमाउँछ । संसारमा धेरै मान्छेमात्र यस्ता हुन्छन्, जो अरूको निश्चल हाँसोमा रमाउँछन् । अरूको खुसीमा आफ्नै खुसी ठानेर रमाउँछन् ।
जो समाज, देशका लागि केही गरौं भन्छन्, मानव दुनियाँका लागि केही गरौं भन्छन् । त्यस्तो मान्छे समाजमा थोरै हुन्छन् र आदरणीय हुन्छन् । यस पंक्तिकारसँग समाजका विभिन्न क्षेत्र, वर्गका मान्छेसँग साक्षात्कार हुने गरेको छ । कहिले मजदुर, ज्यालादारी काम गरेर बिहान–बेलुकीको छाक टार्नेहरूसँग भेटघाट हुने गरेको छ । उनीहरूसँग गफगाफ, भेटघाट गर्दा म छुट्टै आनन्दको अनुभूति गर्छु । किनभने उनीहरूको सरलता र सहजताभित्र आफ्नोपनको आभास गर्छु ।
ठूलाठालुको देखावटीपनबाट वाक्क लागेको बेला यिनीहरूको सरलपन मेरो एउटा औषधी बन्ने गरेको छ । कहिलेकाहीं देशको उपल्लो तह सम्हाल्ने मान्छेहरूसँग पनि साक्षात्कार हुने गरेको छ । उनीहरू मध्ये थोरैले मात्र आफ्नोपन देखाउने गरेका छन् । उपल्लो तहमा पुग्नेहरूमध्ये थोरैको मात्र अरूका लागि पनि सोच रहेको पाउँछु म, आम मान्छेको बारेमा चिन्ता र चिन्तन रहेको देख्दा आफैंमा आह्लादित हुन्छु । भित्रभित्रै श्रद्धाले भरिन्छ, मन ।
अहिलेका मान्छेको प्रवृत्ति हेर्दा लाग्छ, सबैभन्दा स्वार्थी जात भनेकै मान्छे हो । हुन पनि हो, मान्छे आफ्नै स्वार्थमा बाँच्छ र हाँस्छ । यदि मान्छेको समूह र जमातभित्र पनि सबै एकै खालका मान्छे कहाँ हुन्छन् र ? थोरै मान्छेले अरूका लागि पनि सोच्छन् र आफ्नो देश र समाजका लागि पनि सोच्छन् । त्यस्तै मान्छे खोज्दै तिनीहरूको विचार जोख्दै, चाख्दै बितेका छन्, कैयौं दिनहरू मेरा । सबै खालका विचार बोक्ने मान्छेलाई उत्तिकै सम्मानजनक व्यवहार गर्ने गरेको छु ।
मैले जिन्दगीमा यी मान्छेहरूबाट के सिकँे भने आखिर जीवन बाँच्नु त छँदैछ, तर मान्छेका प्रवृत्ति अनेक खालका हुन्छन् । किनभने तिनीहरू फरक–फरक परिवेशबाट आएका हुन्छन् । तिनीहरूको मनोभावना पनि अनेक खालका हुन्छन् । त्यसैले मानव दुनियाँ पनि कहाँ सुखी र खुसी छ र ? अनेक खालका पीडा, दु:खहरू छन्, ती मान्छेका । यी पीडाहरू निकाल्दा कति खुसी हुने गरेका छन् † बाँड्न नसके पनि अलिकति पीडामात्र सुनिदिँंदा पनि मान्छे कति प्रफुल्ल हुन्छन् । यहाँ मान्छेको मुहारमा प्रफुल्लता देख्दा मनमा आनन्दको भाव जाग्छ । यही मान्छेलाई प्रगेल्ने क्रममा यो पंक्तिकारले यस्ता मान्छेलाई पनि भेट्ने गरेकी छे, जो समाजका लागि केही योगदान दिन चाहन्छन् र वर्षाैंदेखि गुनासो पालेर बसेका छन्, मनभरि एक प्रकारको कुण्ठा बोकेर बसेका छन् । यी मान्छेलाई भेट्दा लाग्छ, यिनले समाजमा गर्ने कामको मेलोमेसो भेटाएकै छैनन् ।
हाम्रो समाजमा यस्ता मान्छेहरू पनि छन्, जो जीवनको अर्थ सामाजिक काम गरेर खोजिरहेका छन् । आफ्नो आत्मसन्तुष्टि पनि यसैमा भेट्टाइरहेका छन् । अनि जीवनदेखि खुसी छन् । साँच्चै यस्ता मान्छेलाई भेट्दा गर्वको बोध हुन्छ । हुन त सबै मान्छेले आफ्ना–आफ्ना क्षेत्रबाट समाजलाई नै थोरबहुत योगदान गरिरहेका हुन्छन् । यहाँ केही मान्छे छन्, जो केही पनि गर्दैनन्, समाजमा काम गर्नेहरूको पनि बाधक बनिरहेका हुन्छन् । यस्ता मान्छेले चाहिँ जीवन आफ्नो त व्यर्थ फाल्छन्–फाल्छन्, अरूको पनि जीवन व्यर्थमा फालिदिन खोज्छन् । जो आफ्नोमात्र स्वार्थ ठूलो ठान्छन्, सानोभन्दा सानो कुरामा पनि अधिक समय लिन्छन् ।
आफैमात्र खुसी हौं भन्ने मान्यता राख्छन् । आखिर मान्छेको जीवन न हो, जति खुसी आफ्ना लागि मात्र थुपारे पनि त्यो सारा छोडेर एकदिन छोडेरै सबैले जानैपर्छ । त्यसैले यस पंक्तिकारको के मान्यता छ भने सबै मान्छेले जहाँ जे जुनसुकै क्षेत्रमा होस्, त्यो व्यक्तिले आफ्नो वरिपरिको वातावरण साँच्चै अरूका लागि रमाइलो बनाओस् । जीवन आफ्नै लागिमात्र हो भन्ने सोचबाट अलिकति माथि उठेर जीवन र जगतलाई हेरोस् । त्यसका लागि अलिकति आफ्नो स्वार्थ त्याग्नुपर्छ । अनि मात्र अरूलाई पनि आफ्नै ठानेर प्रेम गर्न थाल्छ । अनि मात्र जीवन सृष्टिका लागि काम लाग्छ । समाजका लागि काम लाग्छ । अनि विश्व जगतका लागि काम लाग्छ ।
प्रकाशित : असार ९, २०७५ ०८:१४